Vamwe Votsamwiswa neMamiriro Akaita Komisheni yeNPRC
Kukadzi 20, 2018
Paitika mhirizhonga yambokanganisa musangano waitwa neveNational Peace and Reconciliation Commission, NPRC, neChipiri muBulawayo vamwe vanhu vachigunun’una namamiriro akaita komisheni iyi.
Vamwe vanhu vange vakabata zvinyorwa zvenyunyuto zvakasiyana-siyana vatanga kupopota vachibva vazoimba mushure mekunge mutevedzeri wasachaigaro veNPRC, Amai Lillian Chigwedere, vatsanangura nezvekusarudzwa kwakaitwa komishini iyi uye kuzivisa mazita evamwe vari mukomishini iyi vavange vainawo pamusangano uyu.
Vanhu vaita mhirizhonga ava vange vachiti komishini iyi yakazara vanhu verudzi rumwe chete rweve chiShona vachititwo havana chivimbo nekuti inogona kugadzirisa nyaya yagara ichinetsa kwenguva refu yeGukurahundi
Mumwe wevafundisi vakabatsira kuronga musangano uyu, VaAnglistone Sibanda, vati vanonzwisisa kugunun’una kwevanhu sezvo nyaya yeGukurahundi yave nenguva yakareba isina kugadziriswa.
Mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, avo vange varipowo pamusangano uyu vati kunyange hazvo vachinzwisisa kushushikana kwevanhu pamusoro penyaya yeGukurahundi havawirirane nemhirizhonga yaitwa iyi.
Vamwe vanhu vashoma vazokwanisa kupa zvichemo zvavo kuNPRC zvisinei nemhirizhonga yamboitika iyi.
Mumwe mugari wemuBulawayo, Amai Queen Maligwa, vati havana chivimbo chekuti NPRC inogona kugadzirisa nyaya yekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana nekuti vanhu vari muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vane maoko akasviba panyaya yeGukurahundi.
Mumwe mufundisi, VaGift Mpofu, vati zvakakosha kuti nyaya yeGukurahundi igadziriswe zvachose vachiti kusaita izvi kunogona kuramba kuchikonzera ruvengo pakati pemarudzi izvo zvinogona kuzomutsa hondo munyika.
Mumwe wemaCommissioner eNPRC, Amai Patience Chiradza, vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekunzwa kubva kune veruzhinji kuti komishini yavo yoshanda sei panyaya yekupodzwa kwemaronda nekuregererana vachiti zvido zvevanhu ndizvo zvavachatevedzera.
Musangano uyu usati watanga Reverend Ray Motsi vanove nhengo yesangano reNational Transitional Justice Working Group varizve mumwe wevakabatsira kuronga musangano uyu vaudza Studio7 kuti vanoziva kusafara kwevamwe vanhu pamusoro pemamiriro eNPRC uye mashandiro aro.
Vati musangano wanhasi wange wakanangana nekuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvakadaro.
VeNPRC vari kuita misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika pamusoro pekupodzwa kwemaronda nekuregererana.